UPDATE: Medical Examiner Determines Teen's Fatal Fall Was Accidental - SPD Blotter
by Jonah Spangenthal-Lee on December 8, 2015 10:59 am
The King County Medical Examiner has determined that the 16-year-old’s death was accidental, the result of an “unintentional fall from a building.”
Xafiska king county medical examiner wuxu soo bandhigay in Geeridii 16 jirkii aheyd mid Shil ah marki “Si an ula kac laheeyn uga soo dacay Daar dheer”
Boliiska Seattle waxey sameynayaan baaritaan ka dib markii uu will dhalinyaro ah geeriyooday isgoo ka soo dhacay balakoon. Booliska Seattle waxey baarayaan dhimashada, ka dib markii arday 16-sano jir ah uu ka soo dhacay balakoon xaafadda Capitol Hill December 5teedii.
Waaxda Boliiska Seattle waxay ka warqabtaa walaaca bulshada oo ku saabsan arrintan kiiskan iyadoo uu Kaaliyaha Madaxa Boliiska Seattle Robert Merner uu isgu shakhsi ahaan uu masuul ka yahay kormeerka arrintan.
Sida baaritaanda dhimashooyinka kale oo idil, waxaan bulshada weydiisaneynaa samir iyo dulqaad, ayna ka fogadaan in ay ku so boodaan ama ay go’aan ka garaan kiiska inta booliisku baaritaanka wado.
Xafiiska King County ee qaabilsan baaritaanka sabata uu qofku u dhintay ayaa soo saari doona sababta uu wiilku u dhintay.
Boliisku waxey ka codsanaynaa qof kasta oo haya warbixin dheeraad ah in ay la soo xiriiraan baarayaasha (206) 233-5000.